Kooxda Xiriirinta ee QM ee Soomaaliya waxay soo dhoweynaysaa Maalinta Haweenka Adduunka ee 2019 | UNSOM
08:53 - 02 Jul
Muqdisho – Kooxda Xiriirinta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa u dabaaldegeysa Maalinta Haweenka Adduunka iyagoo soo dhaweynaya haweenka Soomaaliyeed sida weyn ee ay uga qayb-qaateen nabadaynta, dib-u-heshiisiinta iyo horumarinta sinnaanta arrimaha dhedig-labka [gender] ee dalkooda.
Markiii ugu horreysay ee Qaramada Midoobay ay xusto Maalinta Haweenka waxay ahayd sanadkii 1975-kii. Waxaa waqti dib loo milicsado horumarka laga gaaray helidda xuquuq buuxda oo ay helaan haweenka loona dabaaldego tallaabooyinka badan ee geesinimada iyo go’aanka ku dheehanyihiin ee ay qaadeen haweenka kasoo kala jeeda dhammaan dhinacyada nolosha kuwaas oo door aan caadi ahayn ka cayaaray taariikhda dalalkooda iyo bulshooyinkooda.
Mawduuca dabaaldegga sanadkan waa, u fikir si siman, xikmad wax ku dhis, oo hal abuur wax ku bedel.
Xuska maanta ee Maalinta Haweenka Adduunka ee Soomaaliya wuxuu kusoo aaday waqti muhiim ah iyado dalku u diyaar garoobayo doorashooyin qof-iyo-cod ah sanadka 2020 taas oo u ballan-qaadaysa haweenka Soomaaliyeed inay si weyn cod ugu yeeshaan arrimaha siyaasadeed ee dalka iyo qoondeynta khayraadkiisa. Haweenka Soomaaliyeed waxay guulo waaweyn ka gaareen dhinacyada siyaasadda iyo dadweynaha, oo ay ku jirto kordhinta tirada boqolleyda ah oo lagu kordhiyo 10 boqolkiiba (waxaa lagasoo qaaday 14% waxaana la gaarsiiyay 24%) ee matalaadda haweenku ku leeyihiin Baarlamaanka Federaalka ah lagasoo billaabo 2016kii. Tani waa awood ballaaran oo haddii la mideeyo, saameyn mug leh ku yeelan karta bulshada Soomaaliyeed.
Annagoo ah haween kamid ah bulshadeenna sidoo kalena ka tirsan shaqaalaha QM, waxaan dhamaanteen dadaal ugu jirnaa sidii loo dhisi lahaa duni aad iskugu dheelitiran oo matalaysa aragtiyo kaladuwan, baahiyo kaladuwan iyo hadafyo kaladuwan, ayay tidhi Lisa Filipetto, Madaxa Xafiiska Taageerada QM ee Soomaaliya (UNSOS) “Munaasabadda Maalinta Haweenka Adduunka awgeed, waxaan dhamaantiin idinku dhiirigelinayaa inaad caqligiina, waaya-aragnimadiina iyo hal-abuurkiina iskugu geysaan hawshan adag. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa dhammaan haweenkayga aan wada shaqeeyno sida ay uga go'antahay in ay horumariyaan waajibaadka shaqo ee QM, barnaamijyadeeda iyo qiyamkeeda. Waxaan si kal iyo lab ah u bogaadinayaa haweenka Soomaaliya oo aan ku bogaadinayo dadaalladooda ku aaddan nabadaynta iyo dowlad dhisidda.”
Kooxda Xiriirinta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxay ka kooban tahay saraakiil ka kala socota UNSOS, Hawlgalka Kaalmaynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya iyo tiro ka mid ah hay'adaha Qaramada Midoobay, Sanduuqyada iyo barnaamijyada ka hawlgala dalka.
 Xoghayaha Guud – Fariin Ku Aaddan Maalinta Caalamiga ah ee Haweenka 2019
 Soomaaliya oo xadhiga ka jartay xabsi cusub iyo dhismo maxkamadeed